Uyicwangcisa kanjani inyathelo ngenyathelo ngenyathelo kwaye ungafi uzama | I-Androidsis
Isifundo sevidiyo esisebenzayo apho ukongeza ekubafundiseni indlela elungileyo yokumisela iBlokada inyathelo ngenyathelo, yeyam ngokona ibhloko ibhloko yentengiso yeWebhu kunye nentengiso kwizicelo nakwimidlalo, ndithatha ithuba lokukubonisa ukuba isebenza njani zombini ukususa iintengiso zeWebhu nokuzenza zinyamalale kwizicelo nakwimidlalo apho intengiso iyinto intuthumbo yokwenyani.
Kufanelekile ukuba ukhankanye kwaye uqaqambise ukuba ukusetyenziswa kwesi sicelo kushiyeke kwizandla zobulumko zabasebenzisi nakwimfanelo yabo kunye newebhusayithi okanye usetyenziso kunye / okanye umdlalo abafuna ukuwuvavanya. Ngale nto ndithetha ukuba Ukusetyenziswa gwenxa kweBlokada akulunganga kwi-Android yakho okanye kubenzi bamaphepha eWebhu okanye usetyenziso kunye nemidlalo abasebenzisa ngenene ukungangenisi kunye nentengiso enoxanduvaKwezi meko ezithile, ndincoma ukuba ungasebenzisi iBlokada ukuxhasa umxholo wabenzi bamaphepha eWebhu kunye nabaphuhlisi bezoapps kunye nemidlalo ezisebenzisa ngokufanelekileyo intengiso kwi-Android.
Umzekelo wokuthintela ngokufanelekileyo intengiso yeWebhu ngeBlokada
Kwividiyo endikushiyele nje ngaphezulu kwale migca, ekuqaleni kwale posi, ndicacisa ngokweenkcukacha ukumisela njani inyathelo losetyenziso ngenyathelo lokuthintela zonke ezo ntengiso zingenayo amanye amaphepha eWebhu, usetyenziso okanye imidlalo efuna ukusibeka. ukuba, ukongeza ekucaphukiseni umsebenzisi, ngamanye amaxesha kakhulu, iyacaphukisa, le nto iba yinto engenamsebenzi kuba ngamanye amaxesha ayikuvumeli ukuba ujonge umxholo weWebhu okanye uthintele usetyenziso olufanelekileyo lwesicelo okanye umdlalo obuzwayo.
Umzekelo woLuhlu oluMhlophe lweBlokada
Phakathi kweembalasane ze IBlokada APK, isicelo sokuba yindlela esele ndikuncomile ngayo ngomhla wayo, kufanelekile ukuqaqambisa yayo Ukusebenza ngokugqwesileyo kwizicelo nakwimidlalo ngenxa yoluhlu lwabantu abamnyama olunomtsalane apho sinokumisela khona isicelo ngokweemfuno zethu ezithile.
Ukuba koku songeza uluhlu olumhlophe esinokuthi sidibanise naloo webhusayithi inobuhlobo engasebenzisi gwenxa intengiso okanye ezo zicelo kunye nemidlalo enentengiso ezinzileyo, uhlaziyo oluzenzekelayo lweenguqulelo ezintsha zeapp okanye olunye uhlobo lokukhohlisa olusebenzayo njengenye ngokukodwa ukuba cacisa kwividiyo kwaye apho ndingakwaziyo ukunika iinkcukacha ezithe kratya, ngaphandle kwamathandabuzo, ubuncinci kum, ngaphambili Okona kulungileyo akukho blocker yentengiso ye-Android.
Lonke uqwalaselo lwam lweBlokada kunye nemizekelo yendlela esebenza ngayo kokubini ukukhangela iWebhu okanye usetyenziso lwe-Android kunye nemidlalo, unokuyibona kwividiyo endikushiye kuyo ekuqaleni kwale post. Ndikucebisa ukuba uyibone iyonke kwaye umangaliswe yiyo yonke into asinika yona uBlokada kwaye isebenza njani ekuthinteleni intengiso !!
ukuba khuphela iBlokada mahala Ungayenza ngokunqakraza kule khonkco eya kukusa kwiwebhusayithi yayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyicwangcisa njani iBlokada, eyona blocker yentengiso yewebhu, usetyenziso kunye nemidlalo
Molo! Kulungile ividiyo kodwa uchaza uhlobo lwakudala lweblokada. Inguqulelo yamva nje inokuba nzima ngakumbi kuba unokwenza i-DNS oyifunayo.
Ndifakele iBlokada kwifowuni yam ke ndakhe ndakuva ingxelo evela kuwe! Isicelo esihle kakhulu!
UMario Flórez sitsho
Mkhulu uFrancisco, ndizamile ngaphambili kwaye ayindikholisi, ndizamile nabanye, kodwa into endiyithandayo kukusebenzisa i-AdGuard DNS kwihlabathi jikelele, ke ndiyakuthintela ukufaka usetyenziso lolu hlobo olunokusetyenziswa kakhulu kwebhetri, ndiyisebenzisa Isikhangeli ngaphezu kwayo nayiphi na enye into, ilungile kum, ngokwemidlalo kuphela nguNyana uCirugía kwaye ndiyazikhumbula iividiyo zemivuzo kodwa akukho nto iyenye kwaye kwiYouTube isebenzise inguqulelo yeBances, ividiyo ibalasele ngokulinganayo, iluncedo kakhulu kubasebenzisi abaninzi
Phendula uMario Flórez
NgeBlokada, ugcina ibhetri.
Enkosi ngevidiyo, ungaba nobubele kakhulu ukuba wabelane ngemegadede apk ngaphandle kwentengiso?
Kuyinyani ngentengiso kwiiwebhusayithi ezinomdla kwaye ayisiyongxaki kakhulu, ezo webhusayithi kwaye imbambano ekusebenziseni intengiso ifanelwe ukuvuzwa. Kodwa kukho ingxaki enkulu kunokubona iintengiso ezimbalwa kwiphepha ngalinye: ukuba zonke iiwebhusayithi zisebenzisa inkqubo yentengiso kaGoogle, ukongeza kwiimpawu ezincinci ezisebenzisa iitrackers kunye neendlela zokuchonga.
Ayamkelekanga loo nto, ayikuko ukuba babeka iintengiso ezimbalwa kum kodwa bayandihlola, yiyo loo nto ndingaze ndenze i-block blocker, nditsho nakwiiwebhusayithi endizithandayo, endizihloniphayo kwaye ndizama ukusasaza.
Uxolo, bafana, okanye niyayincama iGoogle Adsense kunye co., Kwaye jonga amaqonga entengiso ahlonipha ubumfihlo, akhoyo, nokuba akahlawuli njengoGoogle, okanye kunjalo kwiikhompyuter zam nakwezo abantu abafuna ingcebiso, awusoze ufumane ubunzima ngopapasho.
Ngokupheleleyo kwaye ngokuqinisekileyo uyavumelana nawe Sergio.
Kulungile ukuba uGoogle ade awazi umbala weetayile zakho zasekhitshini.
Uxolo ngewebhusayithi ezithembekileyo, kodwa zitshintshe inkampani yentengiso okanye NGEKE ndibone intengiso kwikhompyuter yam, uxolo. Ubuncinci ndiya kuyenza YONKE into esemandleni am ukuyenza yenzeke.
I-Blokada ivimba iiwebhusayithi ezininzi ekulayisheni kwaye kufuneka ndiyicime. Yinto eyothusayo leyo, andivaleli nje iintengiso. Ungandinceda? Ngaba kukho enye inketho yokuphelisa intengiso ehlaselayo kwi-navigation kwiiselfowuni ze-Android?